दीपक मनाङ्गेले आज सपथ लिँदै - Naya Pusta
दीपक मनाङ्गेले आज सपथ लिँदै
✍️ नयाँ पुस्ता प्रकाशित मिति : २०७५ पुष २२, आईतवार १२:४२
काठमाडौं । मनाङ जिल्लाबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद् दीपक मनाङ्गले आज आइतबार सपथ लिने भएका छन्। प्रदेशसभा सांसद्‍का रुपमा सपथ लिनका लागि आइतबार बिहानै उनी पोखरा जाने तयारीमा रहेको मनाङ्गेको परिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ।
ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा खेपिरहेका मनाङ्‍गेको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा छ। हाल थुना बाहिर रहेकाले मनाङ्गेले प्रदेश सांसदका रूपमा सपथ लिन पाउनुपर्ने माग गर्दै एक साताअघि प्रदेशसभामा निवेदन दिएका थिए।
मनाङ्‍गे तत्कालीन पुनरावेदन अदातलबाट दोषी ठहर भएका तर सर्वोच्चबाट फैसला आई नसकेकाले सपथ लिन पाउनुपर्ने तर्क उनका पक्षमा रहेकाहरूले गर्दै आएका थिए। यसअघि रेशमकुमार चौधरीले प्रतिनिधिसभा सांसदका रुपमा सपथ लिएपछि मनाङ्गेले पनि सपथ लिने बाटो खुलेको हो।
यो पनि पढ्नुहोस् : कैलालीमा भएको शक्तिशाली बम विष्फोटमा परी घाइते भएका विप्लवका नेता सिंहको मृत्यु
तामाको भाँडामा बिर्सेर पनि नखानुहोस् यी खानेकुरा, हुनसक्छ फुड पोइजनिङ
पायल्स रोग लाग्दा के खाने, के नखाने ? जानी राख्नुहोस ।
कैलालीमा भएको शक्तिशाली बम विष्फोटमा परी घाइते भएका विप्लवका नेता सिंहको मृत्यु
तराई गएको उच्चस्तरीय सरकारी टोली पीडितलाई नभेटी किन फर्कियो?
एनआरएन युकेको उपाध्यक्षमा एलबिजेड नै किन ?, यस्ता छन् एजेण्डाहरु
आजबाट प्यान अनिवार्य, यसरी लिनुहोस् प्यान (तरिकासहित)
चर्चित नायिका केकी अधिकारीका ५ गोप्य तस्बिर भाईरल
जापानी दूतावास बाहिर ७० वर्षीय वृद्धले गरे आत्महत्या
हिमालमा ठोक्कएर सानो बिमान दुर्घटना, ३ जनाको मृत्यु
भारतका चर्चित बाल कलाकार अनु सिंहको सडक दुर्घटनामा परी मृत्यु
खुमन अधिकारी र सारदा पँगेनीको सुनौँ सुनौँ लाग्ने तीज गीत “बाबा आमा” (भिडियो सहित)
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गान्धी पक्राउ, यस्तो छ कारण
तनहुँमा ५ वर्षीया बालिका बलात्कृत, आरोपित पक्राउ
यात्रुले खचाखच भरिएको जीप दुर्घटना, ३ जनाको मृत्यु ११ घाइते !
सोच्नै नसकिने गरी बढ्यो सुनको भाउ, तोलाको कति पुग्यो ?